सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको नाफा ६ करोडभन्दा बढी - Odia News
January 27, 2020 ONE_ADMINLeaveaComment on सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको नाफा ६ करोडभन्दा बढी
माघ १३, काठमाडौं । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डले पुस मसान्तमा रू. ६ करोड ६० लाख ३४ हजार नाफा गरेको छ । मंसिर महीनामा रू. ३ करोड ४२ लाख ६६ हजार घाटामा रहेको यस योजनाले पुस महीनामा नाफामा सुधार ल्याएको हो । पुस महीनामा योजनाले रू. ८ करोड ४२ लाख ८६ हजार आम्दानी गरेको छ ।
जबकी मंसिर महीनामा योजना रू. १ करोड ९० लाख ३५ हजार नोक्सानीमा रहेको थियो । धितोपत्र र बैंक मुद्दती निक्षेपलाई प्रमुख लगानीको स्रोत बनाई सञ्चालन हुने यस योजनको लगानी मूल्य पनि मंसिर महीनाको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।
यस योजनाले बैंक मुद्दती निक्षेपमा रू. १५ करोड लगानी गरेको छ भने निश्चित अवधिको ऋणपत्र तथा बण्डमा रू. ५ करोड ९० लाख लगानी गरेको छ । यी शीर्षकमा गरेको लगानी मूल्य स्थिर छ भने शेयरको मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ । बजारमा पुस महीनामा सकारात्मक प्रभाव देखिएकाले पनि यस योजनको लगानी मूल्य वृद्धि भएको हो ।
मंसिर महीनामा रू. १ अर्ब २६ करोड ५० लाख ५४ हजार रहेको लगानी मूल्य पुस महीनामा रू. १ अर्ब २९ करोड २८ लाख ४४ हजार कायम भएको छ । योजनाले शेयर, मुद्दती निक्षेप र ऋणपत्र तथा बण्डमा धितोपत्र दलाल कमिसन समेत गरी रू. १ अर्ब २५ करोड ३२ लाख १८ हजार लगानीको परल मूल्य उल्लेख गरेको छ । लगानीमूल्य लागत मूल्यभन्दा रू. ३ करोड ९६ लाख २६ हजार बढी हुन आएको छ ।
खुद सम्पत्ति रू. १ अर्ब ५८ करोड ७३ लाख ७० हजार कायम भएको योजनाको प्रति इकाई खुद मूल्य रू. १० दशमलव ५८ कायम भएको छ । मंसिर महीनामा यो मूल्य रू. ९ दशमलव ९१ थियो । यस योजनाले धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत विभिन्न क्षेत्रका ७३ कम्पनीहरुको शेयरमा रू. १ अर्ब ९६ लाख ७६ हजार बराबरको लगानी गरेको छ ।
माघ २४ गते सातै प्रदेशमा विरोध सभा गर्ने नौ दलको घोषणा
January 26, 2020 ONE_ADMIN
लुम्बिनी विकासका लागि सरकार ‘एक्सन’ मा जान्छ : मन्त्री भट्टराई
January 20, 2020 January 20, 2020 ONE_ADMIN
January 27, 2020 ONE_ADMIN